ဒီကနေ့ သြဂုတ်လ(၁)ရက်နေ့မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးရဲ့ဖခင် ဦးတင်မောင်ဦး – Maythadin
ဒီကနေ့ သြဂုတ်လ(၁)ရက်နေ့မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးရဲ့ဖခင် ဦးတင်မောင်ဦး
သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးရဲ့ဖခင်အောက်စီဂျင်လိုအပ်ကြောင်းကိုအမဖြစ်သူကအခုလိုပဲပြောပြလာ ပါတယ်။ဖေဖေကလေLevel 12နဲ့ပေးတာတောင်SPO 270 ပဲရှိတော့လို့အောက်စီဂျင်လေးများကူညီကြပါဦးနော်စက်ကလဲမနိုင်တော့လို့ပါဆိုပီးပြောထားပါသေးတယ်နော်။
ဒီနေ့မှာတော့ ပြေတီဦးရဲ့ဖခင်ဦးတင်မောင်ဦး အသက်(၇၄) နှစ်ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် ကွယ်လွန်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုနဲ့ထပ်တူစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်နော်။ကောင်းရာသုကတိလားပါစေအန်ကယ်ရေ….
သ႐ုပ္ေဆာင္ေျပတီဦးရဲ႕ဖခင္ေအာက္စီဂ်င္လိုအပ္ေၾကာင္းကိုအမျဖစ္သူကအခုလိုပဲေျပာျပလာ ပါတယ္။ေဖေဖကေလLevel 12နဲ႕ေပးတာေတာင္SPO 270 ပဲရွိေတာ့လို႔ေအာက္စီဂ်င္ေလးမ်ားကူညီၾကပါဦးေနာ္စက္ကလဲမနိုင္ေတာ့လို႔ပါဆိုပီးေျပာထားပါေသးတယ္ေနာ္။
ဒီေန႕မွာေတာ့ ေျပတီဦးရဲ႕ဖခင္ဦးတင္ေမာင္ဦး အသက္(၇၄) ႏွစ္ကိုဗစ္ေရာဂါေၾကာင့္ ကြယ္လြန္သြားၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။မိသားစုနဲ႕ထပ္တူစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္ေနာ္။ေကာင္းရာသုကတိလားပါေစအန္ကယ္ေရ….
ဆိုးဝါးလှတဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါကြီးကနေ သေလုမြောပါး လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ သူမရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ပြောပြလာတဲ့ ဘေဘီမောင်
နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ အမှန်တရားဘက်ကရပ်တည်ခဲ့တာကြောင့် တစ်မိသားစုလုံးရှောင်ပြေးနေရတဲ့ ဖွေးစိန်လေးရဲ့ (၃၃) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့